ဖိနပ် - အမျိုးသားပုံစံ | စတိုင်လ်များ (စာမျက်နှာ 2)
အမျိုးသားမုန့်များအကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေပါ။ ၄ င်း၏အားသာချက်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ၊ ရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်၎င်းတို့ကိုပေါင်းစပ်သောအခါမည်သို့မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ယနေ့ခေတ်တွင်ဖန်တီးနိုင်သောခြေအိတ်နှင့်ဖိနပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနှင့်စတိုင်ဆုံးပေါင်းစပ်မှုသုံးခုကိုတွေ့ဆုံပါ။ စမတ်နှင့်ပေါ့ပေါ့နှစ် ဦး စလုံး။
ယနေ့လူသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ မိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေရန်နှင့်သူ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်အားကစားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုး၌တာဝန်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်အားကစားအတွက်ကောင်းသောဖိနပ်များ ၀ ယ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ 2018-2019 collection များမှအကောင်းဆုံးအားကစားဖိနပ်များ
လန်ဒန်၊ မီလန်နှင့်ပဲရစ်မြို့များတွင်တင်ဆက်ခဲ့သောဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ 2018-2019 စုဆောင်းမှုများတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အကောင်းဆုံးအားကစားဖိနပ်များကိုသိကျွမ်းပါ။
ကြံ့ခိုင် Derby ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းလေးခု
Robust Derby ဖိနပ်သည် ၂၀၁၈ တွင်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတွင်၎င်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၄) ခုရှိသည်။
anti-cool sneaker အသစ်များသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်
ယခုဆောင်းရာသီအတွက်အေးမြသောဆန့်ကျင်သောအားကစားဖိနပ်များမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသိကျွမ်းပါ။ ကြံ့ခိုင် silhouettes နှင့် retro ဝိညာဉျကိုလက်ခံသောလမ်းကြောင်းသစ်။
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးသားမွေးဖိနပ်များကိုရှာဖွေပါ။ ဒီရာသီကအမျိုးမျိုးသောပုံစံတွေပါ။
Brogue ဖိနပ်: ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လို
ကျနော်တို့ Brogue ဖိနပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှုများကိုရရှိရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီအတွက်ဇိမ်ခံကုမ္ပဏီများမှအလုပ်ဖိနပ်ကိုးခုကိုအဆိုပြုပါသည်။ သင်ရွေးချယ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားထားသည်။
Retro Sneaker များသည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ရုံးခန်းနှင့်လမ်းပေါ်ရှိစတိုင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်သုံးခုကိုဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
အကျော်ကြားဆုံး anti-cool Sneaker
ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အနာဂတ်နှင့်အနိမ့်ဆန်သောစနီကာများကိုထိုကဲ့သို့သော anti-cool model များဖြင့်အစားထိုးရန်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားဆောင်း ဦး ရာသီ, တောင်တက်, ဂန္ပြေးနှင့် 2017s အားဖြင့်မှုတ်သွင်းမော်ဒယ်များကျဆုံးခြင်း 90 ခုနှစ်တွင်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုအားကစားဖိနပ်အချို့ရှိပါသည်။
ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုခဲ့ဘူးသောရိုးရာဖိနပ်။ ၎င်းတို့သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပေါင်းစပ်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သူတို့သည် espadrilles ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်နာများသည်လမ်းပေါ်ရှိ flip-flops များတွင်ထွက်သွားခြင်းကိုသဘောတူကြသည်
ဒီဇိုင်းနာများနှင့် influ ဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် flip-flops များတွင်ထွက်သွားရန်သဘောတူကြသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးပေါင်းစပ်နိုင်မှုရှိသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအေးမြသောဖိနပ်ဖြစ်သည်။
မင်းတို့အားဗန်အဟောင်း Skool မှသည် Monochrome DC Trase TX အထိ All Star သို့သင်နောက်ဆုံးပေါ်ပတ္တူစနီနာများဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤနွေရာသီအမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံး Self- ကော်ဖိနပ်အချို့ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ရိုးရိုးမော်ဒယ်များ (သို့) မင်းရဲ့ပေါ့ပါးသောအသွင်အပြင်အတွက်ထိတွေ့ထိတွေ့မှုဖြင့်။
မင်းရဲ့အဖြူရောင်စနီကာတွေကိုနွေ ဦး ရာသီဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ
ဒီနွေ ဦး ရာသီမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်မူလအရောင်အသွေးစုံလင်သောသင်တန်းဆရာသုံး ဦး
မင်းရဲ့စနီကာတွေကိုပျင်းနေပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကြားနေလေသံနဲ့ဖိနပ်တွေကို ၀ တ်ဆင်ရတာကိုငြီးငွေ့နေရင် ...
Two- သေံ။ ဒီရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ရောင်စုံဖိနပ်ကိုလက်နက်ချကြပါတယ်
လမ်းဘေးစင်္ကြံမှာ Prada၊ Salvatore Ferragamo ဒါမှမဟုတ် Louis Vuitton တို့လိုဖက်ရှင်ပြပွဲတွေမှာသူတို့ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အခုသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
အီတလီအထည်နှင့်အတူ Vans အသေးစားစုဆောင်းခြင်း
ယခုသက္ကရာဇ်အချိန်ရောက်ပြီ -6ဤနွေရာသီအတွက် 'အလွန်အေးမြသော' ပုံစံ ၆ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Vans x Nintendo စုဆောင်းမှုကိုရောင်းချသည်
တကယ်လို့သင်ဟာအသက် ၉၀ ကျော်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံတွေ၊ အဝတ်အထည်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေ၊ အက္ခရာတွေပါ ၀ င်တဲ့ Nostalgic Vans x Nintendo စုဆောင်းမှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
နွေရာသီအတွက် H&M ဖိနပ်အသစ်သည်ဂန္ထဝင်လိုင်းများပေါ်တွင်အခြေခံထားပြီးအဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ် denim နှင့်ပိတ်ချောများဖြင့်ရောက်ရှိသည်။
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဘွတ်ဖိနပ်ကဘာလဲ။
ဤဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရုံးခန်းသို့ရောအလုပ်အပြီးတွင်သောက်ရန်အကောင်းဆုံးဘွတ်ဖိနပ်အမျိုးအစားများကိုသင့်ထံယူဆောင်လာပါမည်။
အနက်နှင့်အဖြူ: ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသတ်မှတ်သော Nike မော်ဒယ်ခုနစ်ခု
အားလုံးနှင့်အရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်ပေါင်းစုံအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များပါ ၀ င်သည့်ထိပ်တန်းဖိနပ်များ။ Nike
Doctor Martens ဖိနပ်စီးရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ
ဘ ၀ နှင့်ဘောင်းဘီတိုများအရ Doctor Martens ၏ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရန်မတူညီသောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါသည်။
Doctor Martens ဘွတ်ဖိနပ်ကိုဘောင်းဘီနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်သင်ကြောက်သလား။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုဘယ်လိုဖြောင့်ဖြောင့်တဲ့၊
Two- အရောင်ဖိနပ်: ရာသီ၏ကြယ်ဖိနပ်
ပထမဆုံး bicolor ရှူးဖိနပ်ကို ၁၈၆၈ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်မာရှူးဖိနပ်ချုပ် John Loob ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခရစ်ကက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အခုသူတို့ပြန်ဖက်လာကြပြီ
Chelsea boots တချို့ကိုမင်းဘာတွေဝတ်ချင်နေတာလဲ။
ချယ်လ်ဆီးရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်ကဗီရိုအတွက်အဓိကကျတယ်။ ဤစျေးဝယ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးများကို ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်တင်ပြသည်။
Puma ထံမှအသစ်ဆေးတောင့်စုဆောင်းမှု Trinomic
၁၉၉၀ တွင် Puma သည် Trinomic ဟုခေါ်သောသုံးသောနည်းပညာကိုစတင်ခဲ့သည်။
Espadrilles သည်နွေရာသီအတွက် (၁)
Espadrilles သည်နွေရာသီရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဖိနပ်ဖြစ်သည်။ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးလတ်ဆတ်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သော espadrilles များသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်အကြွင်းမဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်
ဂန္ထဝင်ရေကြောင်းဖိနပ်သည်ယခုနွေရာသီနွေရာသီ ၂၀၁၃ ရာသီတွင်အရောင်နှင့်ပစ္စည်းများအစစ်အမှန်နှင့်ဆန်းသစ်သောပေါင်းစပ်မှုများကိုအားဖြည့်ပေးသည်
အင်္ဂလိပ်ကုမ်ပဏီ Olvier Sweeney သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလဖိနပ်များဖြစ်သော Kilties နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့မှုကိုပေးစွမ်းရန်အဆိုပြုထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစတိုင်လ်ထိပ်ကိုမှတ်သားပြီးကတည်းကအချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီး၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မှာဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ မဟုတ်ပါ
Zara ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအတင်းအဖျင်းပြောပြီး၊ ဒီဇိုင်းသစ်ကိုကျွန်ုပ်အထူးကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ မနှစ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ ...
New Balance Revlite 574 သည်ဂန္ထဝင်ပုံစံအသစ်ဖြစ်သည်
New Balance ၏ retro ပုံစံသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှု၊ သော့နှင့်သူတို့ဝတ်ထားသည့်အရာများအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Car Shoe သည်၎င်း၏ loafers များ၏အရောင်နှင့်လက်မလွတ်တော့ပါ
ကုမ္ပဏီအများအပြားမှလာမည့်နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီအတွက်လာမည့် ၂၀၁၃ ရာသီအတွက်စတိုးဆိုင်များသို့စတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ ...
Levitate, Prada ၏အတွင်းပိုင်းပြောင်ဖိနပ်
လမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းထက်အားကစားသမားများအတွက်လေ့ကျင့်ထားသောပုံမှန်ဖိနပ်အချို့သည် Prada ၏ Levitate များဖြစ်သည်။ လေထုအခန်းများအလွန်ကြမ်းတမ်းသောကြောင့် Nike သည်ယင်း၏အပြေးပြိုင်ဘက်မော်ဒယ်များကိုကောင်းစွာလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။
ရေကူးသူတို့ရဲ့ရာဘာ moccasins နှင့်အတူပြန်ဖြစ်ကြသည်
ပြီးတော့ငါပြောတာကဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုသုံးသလဲ။ တကယ်နွေရာသီမှာပုံမှန်အစီအစဉ်အတိုင်းလမ်းပေါ်လျှောက်သွားမှာလား။ ဒါမှမဟုတ်လူကြီးလူကောင်းလိုကမ်းခြေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့လား။ တကယ်တော့ဒီရာဘာဖိနပ်ရဲ့အမှတ်အသားကိုကျွန်တော်တကယ်မရခဲ့ပါဘူး။
Cold Weather Classics, ဆောင်းရာသီအအေးခံရန်အတွက် Vans ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ပါ
Vans ဝတ်ထားတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာထွက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုကြည့်ရအောင်။ ကုမ္ပဏီ၏တည်မြဲသောစွမ်းရည်သည် Vans များနှင့်တတ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကသူတို့၏ Cold Weather Classics စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုသာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒါကိုခုခံနိုင်တဲ့ဆောင်းမရှိဘူး။
Louboutin သူမ၏ Vikram အသစ်အဘို့အအိမ်မှာခြံထွက်ခွာမည်
ကျားသစ်မဟုတ်၊ ကတ္တရာမဟုတ်၊ ကတ္တီပါမဟုတ်၊ ရွှေအသေးစိတ်မပါ၊ နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအရာသည်မူရင်းသားရေခြေချောင်း ဦး ထုပ်ဖြစ်သည်။ Christian Louboutin မှ Vikram အသစ်လည်းဖြစ်သည်။
သင်၏ချယ်လ်ဆီးဘွတ်ဖိနပ်ကိုပေါင်းစပ်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု
ဖိနပ်စီးရန်ဖိနပ်များကိုစတင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်မှဖြစ်သည်။
Supra Skytop III ဖိနပ်သည်အနီရောင် ၀ တ်စုံဖြစ်သည်
Supra Skytop သည်၎င်း၏တီထွင်မှုအကောင်းဆုံး Skytop III model ကိုရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အနီရောင်မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သင်၏စပ်ဖိနပ် Prada မှ Levitate Wingtip
လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ Prada သည် Levitate Wingtip မော်ဒယ်လ်နှင့် Sneaker နှင့် espadrilles ကြားရှိမျိုးစပ်အသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။ အသစ်အဆန်း ...
ရောင်စုံဘဝါး, ဤဆောင်း ဦး - ဆောင်းရာသီ 10-2012 အဘို့အကြှနျုပျ၏အနှစ်သက်ဆုံး 2013
လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင်ကျွန်ုပ်တို့ခြေဖဝါးတွင်မည်သည့်လမ်းကြောင်းများတွေ့မြင်မည်နည်း။ သံသယမရှိဘဲ, ဘုရင်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုမှာဖိနပ်ဖြစ်လိမ့်မည် ...
New Balance ML574၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်ပိုမိုအရောင်များ
New Balance သည် ML2012 မော်ဒယ်လ်အတွက်လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် Sneaker အမျိုးအစားသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ငါတို့ဘာမြင်နိုင်မလဲ ...
Zara မှနွေ ဦး ရာသီ / နွေရာသီရာသီတွင်ရေကြောင်းဖိနပ်နှင့်ယောင်္ကျားလေးများ
နွေ ဦး ရာသီ / နွေရာသီအတွက် Zara ကုမ္ပဏီ၏ရေကြောင်းနှင့် moccasins အတွက်အဆိုပြုချက်
နယူး Converse DC ရုပ်ပြ Sneaker
ကာတွန်းပုံနှိပ်သောစနီကာများနှင့် Converse နှင့် DC တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။
မြူးနစ်ဖိနပ်၊ ဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၁-၂၀၁၂
UGG ၏ခြေညှပ်ဖိနပ် - ငါ့ခြေထောက်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအသက်သာဆုံး
ငါ UGG ကိုဖတ်တဲ့အခါငါတို့အားလုံးသူတို့ခြေနင်းဖိနပ်၊ မူလဒါမှမဟုတ်တုပပုံကိုစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတာ ...
Zara Loafers ဖိနပ်
သင်၏ခြေထောက်ပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဝတ်ဆင်ရန် Zara loafers ။ ဖက်ရှင်ဖြစ်ခြင်းသည်စတိုင်ကျသောလူဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
Adidas Winged Sneaker ၀ ယ်ပါ
ဤထက်မြက်သောအနုပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့် Adidas ဟုလူသိများသောကျော်ကြားသောဖိနပ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...
အဆိုပါ Tuxedo, အထီး formalwear
Converse ၏ retro retro sneaker များ
ယခုဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ - ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ရာသီအတွက်စတိုးဆိုင်များတွင် Converse signature collection အသစ်ရှိသည်။ သူ့တစ် ဦး ...
Barbour များအတွက် Rockport ဖိနပ်
Barbour ကုမ္ပဏီသည် Belstaff ကဲ့သို့ပင်၎င်း၏ဂျာကင်အင်္ကျီများဖြင့်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီသည်လည်းအလောင်းအစားလုပ်မည်။
နယူး Vespa နှင့် Adidas ဖိနပ်
Adidas ကုမ္ပဏီသည်ယခုရာသီအတွက်စုဆောင်းမှုအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ Vespa မော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အောင်မြင်စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည်။
Loafers လားလှေဖိနပ်လား။ သင်ရွေးချယ်
Timberland၊ ၂၀၁၀ နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီ Aventura စုဆောင်းခြင်း
ဒီနွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီရာသီအတွက် Timberland အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်အဆန်းများထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Aventura စုဆောင်းမှုကိုတွေ့ရပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
Louis Vuitton ကကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးဖိနပ်ဖြစ်သည်
ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ (သို့မဟုတ်ယူရို ၇,၃၅၀) သည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Louis Vuitton မှစီးသောဖိနပ်များတန်ဖိုးရှိရာကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။
ယောက်ျားတို့အတွက် Gladiator ဖိနပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိနပ် ၀ ယ်သည့်အခါတိုင်းမတူညီသော shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးရှိသည်ကိုသတိရသင့်သည်။
အကြှနျုပျ၏ Adidas: သင်၏ဖိနပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
အားကစားကုမ္ပဏီ Adidas ကသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖိနပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပြီးအများဆုံးဖန်တီးနိုင်သည်။
Las Yayas နှင့်သူတို့၏မုန်းတီးသော espadrilles
အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ်နွေရာသီသူကပြောတယ် espadrilles နောက်တဖန်ဖက်ရှင်ဖြစ်လာရန်ကြိုးစား? အဲဒါကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အရာပါ
သင်ဟာတစ်နေ့တာအတွက်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်လိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင် (သို့) မင်းအမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်မမက်ဖူးတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံကိုရချင်တယ်ဆိုရင် ...
Repetto သည် Michael Jackson ၏ကခုန်ဖိနပ်ကိုပုံတူပွားစေသည်
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အဖျားမှာအကန့်အသတ်ရှိပုံရသည်။ သင့်ရဲ့လအထိရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
Williot & El Ganso ... အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တူညီမှု
ကြက်၊ ကြက်၊ အကယ်၍ ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ပါက ...
Bikkembergs, classy ဖိနပ် (II)
Louis Vuitton အမျိုးသားစီးဖိနပ်စုဆောင်းခြင်း
အောက်တွင်တင်ပြမည့်အမျိုးသားများအတွက်ခြေနင်းဖိနပ်များမှာပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Louis Vuitton မှဖြစ်ပြီး ...
Mc Laren Sport သည်မော်တော်အားကစားအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဖိနပ်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ အတူတူ…
Manolo Blahnik အမျိုးသားများအတွက်ဖိနပ်
Manolo Blahnik သည်လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကအမျိုးသားများ၏ဖိနပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများအတွက်သူ၏လိုချင်သောမော်ဒယ်များကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ မရှိရင်…